महिलाहरुका लागि मेकअप प्राकृतिक कुरा हो ।तर, सुन्दर देखिने होडमा आफ्नो अनुहारको छालालाई नै असर पर्ने गरी मेकअप गरिरहेका पनि हुन्छन् कतिपय महिलाहरु । जसले सुन्दरभन्दा पनि अझ धेरै उमेरको देखाइरहेको हुन् ... ....
एजेन्सी– कुनै पनि महिलाले यौन सम्पर्कका बेला चरम सन्तुष्टी पाए नपाएको कुरा उनको हिँडाइबाटै थाहा हुने पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन अनुसार सेक्सका बेला चरम आनन्दमा पुग्ने महिला अरु महिला भन्दा ... ....
काठमाडौ । प्रायःजसो महिलाहरुको शरिरको छालाभन्दा योनिको बाहिरी छाला फरक हुन्छ । महिलाहरु आफ्नो शरीरको रङसँग योनी बाहिरको छाला किन कालो भएको होला भनेर सोच्ने गर्दछन् । योनीको छाला कालो हुनु र अन्य कुराह ... ....
यस्तो छ साउनमा हरियो लगाउनुको धार्मिक कारण !
काठमाडौं । साउन महिना शुरु भएसँगै युवती र महिलाहरु हरियो तथा पहेँलो चुरा र सारीमा सजिएका देखिन्छन् । आज भोलि हरियो सारी, चुरा पोते, पहेलो सारी चुरा पोते फेसन जस्तै बनेको छ । फेसनको रुपमा नै आएपनि यसको ... ....
काठमाडौं। मानिसहरू धेरैभन्दा धेरै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चासो राख्ने गर्छन्। कतिले त यौन सन्तुष्टि पाउने नाममा लिंगको आकार बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। सञ्चार माध्यममा गरिने यौन स्वा ... ....
परिवारसँग ‘हट’ मेस्सी (फोटो फिचर)
एजेन्सी। बार्सिलोनाका सुपर स्टार लियोनल मेस्सीले समुन्द्रमा श्रीमती र छोराहरुसँगको ‘हट’ तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्।क्लबका सहकर्मी नयाँ सिजनको तयारी खेलमा जुटिरहेको बेला प्रिसिजन अघि छुट्टी मनाउन बसेका ... ....
काठमाडौ । तपाई हामि आफ्नु शरीरको कति ख्याल राख्छौ ? त्यो तपाइमा भर पर्ने कुरा हो तर हामीले लगाउने बस्त्रले हाम्रो शरीरमा कति हानी गरेको छ त्यो यकिन गर्दैनौ हामि ।अझ भित्रि बस्त्रको बारेमा हामि खासै ख् ... ....
यसरि लगाउनुहोस मेहेन्दी ! (तस्वीर सहित )
काठमाडौ। साउन महिलाको विशेष महिना हो । महिनामा महिलाले व्रत बस्ने, हरियो, पहँेलो र रातो पहिरनमा सजिने भएकाले यो महिना उनीहरूका लागि विशेष मानिन्छ । त्यस्तै पहिरन र शृंगारमा पनि रङको विशेष संयोजन गरिन् ... ....